Uhlobo luka-Anna Sedokova oluthile "olungelona luhle" luvuyisa abalandeli bakhe: imfihlelo yesini yesibheno
I-formerly "Viagra" u-Anna Sedokova uchongiwe ngokufanelekileyo ngenye yeemvumi ezona zixhomekeke kwizoshishino zasekhaya. Emva kokuzalwa komntwana wesithathu u-Anna waqaphela ukuba uphinde wabuyiselwa ngeekhigramgram ezili-10 kunye nomfanekiso wakhe ungaphelelekanga. Nangona kunjalo, iifoto ezitsha zivela kwi-Instagram yomculi, zibangele ukunyaniseka kwamaqhawe akhe kwaye ziqokelele inani elikhulu lokuthanda.
msi_tofi_offcial Kwanokuba uqhathanise akukho mntu. enye enye.
i-luka_stilin Iifom ezintle, i-podkachena, kukho into ekubonayo kwaye yintoni enokumona) Inkulu, Anechka
didiakhmetshina ndiza kuba no -1010) jonga umhle
solomanin Yilo luhle! Nantsi kunjalo ewe !! Ndiyothuka! Mhle!
Izixhobo zokutya u-Anna Sedokova
U-Anna akafihli ukuba ngexesha lakhe wandisa ubungakanani bebele zakhe kwaye wayilungisa ngokucacileyo ubuso obuso, nangona kunjalo, umntu ogxininisekile kunye nobungqingili ungokoqobo. Umculi unamathela kwinkqubo yakhe yokutya, isiseko salo mveliso equkethe inani elikhulu leenzyme. Ezi enzyme zinceda ukugaya, ukukhuthaza ukususwa kweesxibisi ezisuka emzimbeni nokukhawulezisa imetabolism. USedvava ukhetha ukungasebenzisi iipilisi ezikhethekileyo, kodwa ukufumana i-enzyme ngohlobo. Ukwenza oku, usebenzisa inamba enkulu yeziqhamo kunye nemifuno, kwaye uzama ukungabonakalisi iimveliso kwiinkqubo zokushisa. U-Anna washiya ngokupheleleyo ushukela kunye nemveliso yefriji kwaye uzama ukuxuba iiprotheni kunye ne-carbohydrates kwisidlo esisodwa.
Ukuqeqeshwa kwezemidlalo ka-Anna Sedokova
Umdlali we-actress uyazi kakuhle ukuba nokuba ukutya okufanelekileyo kakhulu akuyi kuba ngumnini womzimba omhle ngaphandle kokuqeqeshwa kwezemidlalo rhoqo, ngoko ungumxhasi okhuseleyo wokuqina. Nsuku zonke ugijima ngokusa, ubuncinane kathathu ngeveki ukutyelela i-gym. USedokova uyavuma ukuba akayena mdlali omkhulu "weengqungquthela" kwaye ukhetha i-cardio, i-squats, i-push-ups kunye nokuzilolonga. Ngomqeqeshi womntu siqu, uhlala ebhokisini, ecinga ngayo, ngokufanelekileyo ukuyikhupha izandla kunye neenyawo. Ukuba eMelika, u-Anna uzama yonke imihla ukuba ahambe kunye neentombi zakhe ukuya echibini, oku sele kuseyintsapho yentsapho.
Ukunciphisa isisindo ngeveki: ukusetyenziswa komlenze
Indlela yokucoca igazi ngokutya
Ubu fetishism ngokwesondo njengentlupheko
Iinkqubo ezivuthayo emzimbeni womntu
Yintoni oyifunayo ikati?
Ukufundisa abantwana abane-autism
Iiglavu ezinde - umzila wentsuku: indlela yokukhetha nokugqoka ngo-2017
Ikhalenda yokukhulelwa: iiveki ezintathu ezikhulelweyo